मुटुलाई स्वस्थ राख्नुका साथै अनुहारलाई चम्किलो बनाउन मद्दत गर्ने कागतीको चमत्कारिक फाइदाबारे जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
-कागतीको रसमा २ गुणा पानी,२ वटा ल्वाङ र मरिच राखी सेवन गर्नाले अरुचि भएको मानिसलाई खानामा रुचि हुन्छ । यसको साथै कागती काटेर बिरेनुन छरेर चाट्नाले पनि खानामा रुचि बढ्दछ ।
-मनतातो पानीमा कागतीको रस र मिस्री मिलाइ दैनिक रुपमा बिहान-बिहान पिउनाले कलेजो सफा हुन्छ ।
-प्रत्येक दिन बिहान २०० ग्राम तातोपानीमा २ चम्चा ताजा कागतीको रस र १ चम्चा मह सेवनले मोटोपना घट्छ ।
-छालामा आएको कालो दाग,दाद आदि पनि कागती काटेर रगड्नाले ठिक हुन्छ् ।
-.कागती काटेर ढुंगामा घोट्ने र कपडामा पोको पारेर आँखामाथि राखेर सेक्नाले आँखामा कचेरा आउने,रातो हुने र दुख्ने आदि रोग निको हुन्छ ।
-दुई फक्लेटा कागती कन्चेटमाथी राखेर एक घन्टासम्म सेक्नाले टाउको दुख्ने रोग निको हुन्छ ।
-पागलपनका बिरामीहरुलाई कागतीको रस निधारमा लेपन गरिदिनाले धेरै लाभ पुर्याउदछ ।
-कागतीको रसले अनुहारमा मसाज गर्नाले अनुहारमा रहेको चाया निको हुन्छ ।
-कागतीको रसमा मह मिलाई लगाउने र मनतातो पानीले सफा गर्नाले अनुहार चम्किलो हुन्छ ।
यी हुन निचोरेको फालेका कागतीका चार अनौठा फाइदाः
कागतीको अरु छुटेका फाइदाहरु र यसको प्रयोग :
अन्य १२ फलफूलका बोक्राका फाइदा :
– काँक्रोको बोक्रा खाने गर्नाले हड्डी बलियो बन्छ ।
– काँक्रोको बाहिरी भागमा भिटामिन ए र के प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । त्यही भएर बोक्रा नताछीकन काँक्रो खाने गर्नुपर्छ ।
– शरीरको वजन घटाउन काँक्रोको बोक्रा खानु बडो उपयोगी हुन्छ ।
– स्याउको बोक्रामा क्यान्सरबाट बचाउने तत्व पनि पाइन्छ ।
– स्याउमा पाइने पोषक तत्वमध्ये अधिकांश बोक्रामा थुप्रिएका हुन्छन् । त्यही भएर बोक्रा ताछेर स्याउ खाने मूर्खता गर्नु हुँदैन ।
– स्याउको बोक्रामा फ्लेभोन्वइड नामक तत्व पाइन्छ, जसले रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ ।
– कागतीको बोक्रामा एन्टी
–अक्सिडेन्ट पाइन्छ, जुन अनुहारका लागि ज्यादै उपयोगी हुन्छ ।
– कागतीको बोक्रा त्यसै खान सकिँदैन भने चूर्ण बनाएर खान सकिन्छ ।
– कागतीको बोक्रा खाने गर्नाले रोगप्रतिरोधी क्षमता चाँडै वृद्धि हुन्छ ।
– कागतीको बोक्रामा क्यान्सरबाट जोगाउने तत्व पनि पाइन्छ ।
– सुन्तलाको बोक्राको चूर्ण बनाई मनतातो पानीसँग पिउने गर्नाले कब्जियतको समस्या हटेर जान्छ ।
– सुन्तलाको बोक्रामा प्रशस्त पौष्टिक तत्व हुन्छ । सक्नुहुन्छ भने सुन्तलाको बोक्रा मर्यांग मर्यांग चपाएर खानुस् । यसले मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने जोखिमलाई कम गरिदिन्छ ।
– सास गनाउने समस्या छ भने सुन्तलाको बोक्रा खानाले राम्रो गर्छ । यसमा पाइने एसिडले मुखमा रहेका ब्याक्टेरिया नाश गर्छ र सास ताजा बन्न पुग्छ ।
–अनारको बोक्रामा आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले यो खाने गर्नाले रक्तअल्पतालगायत समस्याबाट समेत जोगाउँछ ।
– घाँटी खसखस भएर दिक्क हुनुभएको छ भने अनारको बोक्रा खाँदा सञ्चो हुन्छ ।
– गिजाबाट रगत निस्किने समस्या भएकाका लागि पनि अनारको बोक्रा उपयोगी हुन्छ ।
– आँखामा जुनसुकै खालको इन्फेक्सन भएको छ भने केराको बोक्रा खानु फाइदाजनक हुन्छ ।
– केराको मूल फलमा भन्दा यसको बोक्रामा बढी उपयोगी तत्व हुन्छन् । केराको बोक्रामा फाइबर उच्च मात्रामा पाइन्छ, जसले पाचनलगायत शरीरको समग्र प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
– केराको बोक्रामा एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरलाई बलियो राख्ने, रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउनेलगायत काम गर्छ ।
– शरीरको वजन नघटेर वाक्कदिक्क हुनुभएको छ भने खरबुजाको बोक्रा खाने गर्नुस् । यसले वजन घटाउन सहयोग गर्छ ।
– खरबुजाको बोक्रा यत्तिकै खान नसकिने भएकाले ससानो टुक्रा पारी खाने गर्नुस् । यसो गर्दा पनि खान अप्ठेरो भयो भने नुन-खुर्सानीमा चोपेर खाने गर्नुस् ।
– अन्डाको बोक्रालाई सब्जी तथा फलफूलसँगै राख्नाले चाँडै सड्दैन ।
– प्याजको बोक्रालाई पानीमा उमाल्ने । त्यसपछि उमालेको पानी कपडालाई रंगाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– लसुनको बोक्रालाई पानीमा उमाल्ने । पानीलाई मनतातो बनाएर कपाल धोएमा कपाल बढ्छ ।
– आलुको बोक्रामा ब्लिचिङ्ग एजेन्ट्स हुन्छ, जसलाई छालामा लगाउनाले घामको कडा किरणबाट बचाउँछ ।
– ओखरको कडा बोक्रालाई पानीमा आधा घण्टा उमालेर त्यसको पेस्ट बनाई कपालमा लगाउनुहोस् । यसले कपाललाई प्राकृतिक कालो बनाउँन मद्दत गर्छ ।
थप कागतीको बोक्राको फाइदा :
१. कोलेस्ट्रोल घटाउँछ – यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई घटाउन सहयोग पुर्याउँछ । शरिरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा अत्यधिक हुँदा यसले मुटुलाई स्वस्थ हुनबाट रोक्छ । कागतीको बोक्रामा पाइने पोलिफिनलले कोलेस्ट्रोललाई कम गरेर तपाईंको शरिरलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ ।
२. मुटुलाई राख्छ स्वस्थ – कागतीको बोक्रामा पाइने पोटासियमले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्दछ। सहि रक्तचापले हाम्रो मुटुलाई पनि स्वस्थ राख्दछ । यसका साथै कागतीको बोक्राले हाम्रो मुटुलाई धड्कनलाई सहि मात्रामा राख्ने गर्दछ भने मधुमेहबाट पनि टाढा राख्दछ ।
३. मुखको स्वास्थयलाई पनि राख्छ सहि – मुखको स्वास्थयलाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि कागती निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । भिटामिन सि को कमीले कमजोर दाँत र गिजाबाट रगत आउने समस्या हुने गर्दछ । भिटामिन सि को कमीले ‘स्कर्भी’ र ‘जिंजिविटस’ हुने गर्दछ । कागतीको बोक्रामा सिट्रिक एसिड अत्यधिक हुने भएकाले यसले भिटामिन सिको कमीबाट हुने हानीलाई भरपाइको मद्दत गर्दछ । यसले दाँत र गिजासँग सम्बन्धित रोगलाई पनि टाढा राख्दछ ।
४. तौल घटाउँछ – कागतीको बोक्राले तौल घटाउनमा पनि मद्दत गर्दछ। यसमा पेक्टिन नामको तत्व पाइने गर्दछ जसले शरिरमा जमेको अनावश्यक बोसोलाई घटाउने काम गर्दछ । यदि तपाईं आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने कागतीको बोक्राको अवश्य सेवन गर्नुहोस् ।
५. सुन्दर छाला – एक्ने, पिग्मेन्टेसन र गहिरो निशानाबाट बाट बच्नका लागि कागतीको बोक्रा लाभदायक हुने गर्दछ । यसका पाइने फ्री–रेडिकल्सले यो प्रक्रियामा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ । यसका साथै यसमा पाइने एन्टि अक्सिडेन्ट्सले छालालाई डिटक्सिफाई गर्ने गर्दछ जसले तपाईंको छाला स्वस्थ र चम्किलो हुने गर्दछ ।
६. हड्डी बलियो बनाउँछ – कागतीको बोक्राले तपाईंको हड्डीलाई बलियो बनाउँछ यसमा उच्च मात्रामा क्याल्सियम र भिटामिन ‘सि’ हुने गर्दछ जसले हड्डीलाई स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्दछ । यसका साथै हड्डीजस्तो जोडिएको रोग जस्तै ओस्टियोपोरोसिस । रहेयुमेटयड अर्थराइटिस र इन्फ्लेमेटरी पोलीअर्थराइटिसबाट पनि बचाउन सहयोग गर्दछ ।
७. अक्सिडेटिभ स्ट्रेसलाई टाढा राख्छ – अक्सिडेटिभ स्ट्रेसलाई टाढा राख्नका लागि कागतीको बोक्राले निकै सहयोग गर्ने गर्दछ । यसमा उच्च मात्रामा फ्लेवानायड हुने भएका कारण अक्सिडेटिभ स्ट्रेसबाट शरिरलाई टाढा राख्ने गर्दछ ।
८. टक्सिन हटाउँछ – हाम्रो शरिरमा थुप्रै विषालु पदार्थ अर्थात टक्सिन हुने गर्दछ । यस्तो पदार्थले हाम्रो शरिरलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउनुका साथै हाम्रो शरिरभित्र अल्कोहल र अन्य थुप्रै हानिकारक खाद्य पदार्थलाई नष्ट गर्ने गर्दछ कागतीको बोक्रा आफ्नो अमिलो स्वाद र स्वभावका कारण यस्तो विषालु पदार्थलाई टाढा राख्न मद्दत गर्दछ ।
९. क्यान्सरसँग लड्छ – यो विषयमा धेरै थोरै मानिसहरुलाई जानकारी छ तर कागतीको बोक्राले क्यान्सरबाट बचाउन र यसको उपचारमा निकै मद्दत गर्दछ। यसमा पाइने तत्वले क्यान्सरको कोशिकासँग लड्न सहयोग पुर्याउँछ ।
१०. अन्य फाइदा – यसका साथसाथै कागतीको बोक्राले कलेजोर्ला पनि सफा राख्छ, कानको संक्रमणलाई टाढा राख्छ, रक्त प्रवाहलाई सुचारु गर्दछ, मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ र यसले पक्षघातलाई पनि टाढा राख्नमा मद्दत गर्दछ ।
Don't Miss it हवाईयात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, के खाने, के नखाने ?
लसुन जसको प्रयोग जाने यति धेरै रोगको जडी ओखती हुन्छ, के तपाईलाई सहि तरिका थाहा छ ? थाहा पाउँनको लागि…
चिसाे पानीले नुहाउदा हुने फाइदाबारे जान्नुहाेस्
प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै खेती गर्ने तरीकामा पनि परिवर्तन भएको छ । सामान्यतया खेतीका लागि जमीन, सिँचाइ, मलखाद, जनशक्तिलगायतको आवश्यकता पर्छ…